बाल कथा : साँच्चैको हिरो - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← गजल : अनि पिउन मन लाग्छ
छोक : हरफ थपिदेऊ भूपि →
हात फैलाउँदै केटो मेरो नजिक आइपुग्यो । मैले ट्वाल्ल परेर उसको अनुहारमा हेरिरहेँ । एकछिन त ऊ मसँग डरायो पनि । मैले मुसुक्क हाँसेर उसको हातमा पचास रुपियाँको नोट राखिदिएँ । केटोले मलाई क्वारक्वार्ती हेर्न थाल्यो । मैले सानो स्वरमा भनेँ – “बाबु ! यो पैसा मैले तिमीलाई नै दिएको हुँ, लैजाऊ । एउटा कुरा भने नबिर्सनु । यो पैसा मैले दुःख गरेर कमाएको हुँ । यसको खर्च सही काममा गर्नु ।”
म फेरि उसको पछि लागेँ । एउटा पुरानो पहिलो तला प्रायः भत्किसकेको घरको छिँडीको कोठाभित्र ऊ फुत्त छिर्‍यो । वरिपरि अँध्यारो भएकाले उसले मलाई देख्न सकेन । एकछिनपछि एकजना बूढी आमै ख्वाङ्ख्वाङ् खोक्दै उठिन् । केटो बडो उत्साहसाथ करायो- “आमै, मैले तिम्रो लागि खोकीको औषधि ल्याएँ नि ! ल उठ अब औषधि खाऊ ।”
“बाबै मकै खान्छस् ?” आमैको प्रश्नसँगै त्यो बालक अलि खुसी भयो । उसले आमैलाई दुई चम्चा औषधि मुखमा हालिदियो । आमैलाई औषधि खुवाउन पाउँदा ऊ असाध्यै खुसी देखिन्थ्यो । उसको अनुहारमा अचम्मको चमक थियो ।
औषधि खाएर ओछ्यानमा पल्टेकी आमालाई हेर्दै त्यो केटो उठ्यो र भन्यो- “आमै ! तिमी मकै खान सक्दिनौँ । म पाउरोटी किनेर ल्याउँछु । अनि तिमी र म सँगै बसेर मकै र पाउरोटी खाउँला है !” यति भनेर केटो फेरि चोकतिर दौडियो ।
आमाले पाउरोटी खाएर सुतेपछि केटो अब आफैँ मकै खान थालेको थियो । यतिबेला मैले आफू आएको जानकारी उसलाई दिनु उचित ठानेँ । ‘ओहो भाइ ! म त तिम्रोमा आएँ नि है !’ भन्दै म उसको कोठाभित्र छिरेँ ।
“तपाईं अघि पोखरीमा मलाई पचास रुपियाँ दिने दाइ होइन ?” केटोले खुसी हुँदै मसँग प्रश्न गर्‍यो । मैले ‘हो’ भनेर टाउको हल्लाएँ । उसले आमालाई घचघचाउँदै करायो- “आमै, हेर त तिमीलाई औषधि किन्न पैसा दिने दाइ यिनै हुन् ।”
अहिलेको कृष्णबहादुरको कोठाको अनुहार पनि फेरिएको रहेछ । यसरी यति सानै उमेरमा आफ्नो बाबु र नातागोताबाट टाढा रहेर पनि आफ्नी आमालाई नयाँ जीवन दिई आफू पनि उज्यालो भविष्यतिर हिँडेको कृष्णलाई भेटेपछि म सधैँ आफ्नो छोरोलाई भन्ने गर्छु – “बाबु, आज मैले साँच्चिकै हिरोलाई भेटेर आएँ ।”
मेरो छोरो ‘को बाबा, राजेश हमाल ?’ भनेर मलाई प्रश्न गर्ने गर्छ । म भन्छु – “होइन छोरा, कृष्णबहादुर । ऊ चलचित्रको होइन, वास्तविक जीवनको हिरो हो ।”
(स्रोत : मुना २०६६ मंसिर)